DR Kongo: ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia toerana iray arahan'ny valan-javaboary Kahuzi-Biega National Heritage
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » DR Kongo: ny Birao Afrikana misahana ny fizahan-tany dia toerana iray arahan'ny valan-javaboary Kahuzi-Biega National Heritage
Aprily 3, 2019
Ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany dia miarahaba ny Kahuzi Biega National Park ho mpikambana vaovao. Ny valan-javaboary Kahuzi-Biega dia faritra arovana akaikin'ny tanàna Bukavu any amin'ny faritra atsinanan'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo. Any akaikin'ny moron'ny farihin'i Kivu sy ny sisintanin'i Rwanda no misy azy.
“Toerana tokony hisy ny Birao Afrikanina momba ny fizahantany, efa ela izahay no nanafina. Rehefa mikaroka fizahan-tany any Kongo ianao dia fampahalalana momba an'i Virunga na vaovao momba ny mpihaza. Te-hanisy fiovana isika. Andao hampivondrona ny ezaka ataontsika mba hampiroboroboana ny indostrian'ny fizahantany afrikanina. ”
Ireo no teny nataon'i De Dieu Bya'Ombe, talen'ny Kahuzi Biega National Park.
Manazava ny mombamomba ny maha mpikambana azy izy:
Kahuzi-Biega National Park dia fonenan'ny biby mampinono betsaka kokoa noho ny toerana hafa Albertine Rift. Izy io no tranokala MOST faharoa lehibe indrindra amin'ny faritra misy ireo karazana endemika sy amin'ny resaka harena manan-karena. Ilay valan-javaboary dia manana karazan-biby mampinono miisa 136, anisan'izany ny gorilazy any amin'ny faritra iva atsinanana no kintana ary karazan-jaza 13 hafa toy ny chimpanzees Anisan'izany ireo karazana tandindonin-doza, gidro colobus mena, ary rajako L'Hoest sy Hamlyn.
• Karazan-ala hafa tsy dia fahita any amin'ny faritra atsinanan'i RDC no misy aussi Toy ny génet goavambe (Genetta victoriae) sy genetika anaty rano (Genetta piscivora). Ireo biby mampinono any amin'ny ala afrikanina afovoany aussi dia miaina ao amin'ny valan-javaboary toy ny elefanta ala, buffalo ala, kisoa ala goavambe ary ny bongo.
• Ny KBNP dia miorina amin'ny faritry ny endemism (taona endom-borona) lehibe ho an'ny vorona APPROBATION avy amin'ny Birdlife International. Ny Wildlife Conservation Society dia nanangona lisitry ny vorona tao amin'ny valan-javaboary tamin'ny 2003 niaraka tamin'ny karazana 349 Anisan'izany ny 42 endemika.
• Toy izany koa, ny valan-javaboary aussi dia nekena ho ivon'ny fahasamihafana ho an'ny zavamaniry avy amin'ny IUCN sy WWF tamin'ny taona 1994 miaraka amina karazana 1,178 farafahakeliny voatanisa ao amin'ny faritra avo, ny ampahany ambany dia mbola tavela ao amin'ny lisitra.
• Ny valan-javaboary dia iray amin'ireo tranokala Afrikana atsimon'i Sahara atsimo izay ahitan'ny flora sy ny biby miova avy amin'ny ambany ka hatrany amin'ny haavony. Anisan'izany ny fampianarana, raha ny marina, ny zava-maniry rehetra any an'ala manomboka amin'ny 600 m ka hatramin'ny 2600 m, ny Moist Forest ary ny ala avoavo any an-tendrombohitra any ambony ala montane sy ny volotsangana. Any ambonin'ny 2600 m any an-tampon'ny Kahuzi Biega sy ny tendrombohitra, dia nanamboatra zavamaniry mandoto zavamaniry manana zavamaniry Senecio kahuzicus.
• Ny valan-javaboary dia manana toerana mahazatra Aussi amin'ny ankapobeny fa tsy zavamaniry miely patrana toa ny honahona sy ny havoana avo ary ny ala honko ary ny faritra ripara dia feno rano amin'ny toerana rehetra.
Noho ireo zava-miavaka rehetra voalaza etsy ambony an'ny valan-javaboary Kahuzi - Biega, dia mikaroka mialoha izahay mba hampivelatra ny hetsika fizahantany ara-tontolo iainana sy ny fizakan-kevitra maharitra momba ny fitahirizana izay hanome aingam-panahy ny taranaka ho avy.
Kahuzi Biega dia vakoka manerantany namboarina tamin'ny taona 1970 ho an'ny tanjona lehibe hiarovana ny gorila ambanin'ny tany. Ny valan-javaboary Kahuzi-Biega dia mizara ho faritra roa ampifandraisin'ny lalantsara tery: Rainforest Mountain (Afro-montane ala volamena) amin'ny lafiny iray, ary ny ala tropikaly ambany (Guinea-Congo somary mando) etsy ankilany.
Faritra afrikanina iray zara raha misy ny tetezamita miditra amin'ny karazan'ala orana roa mbola mijanona tsara. Hatreto dia karazan-javamaniry 1178 mahery no voarakitra ao amin'ny haavo avo, ka nahatonga azy io ho tranokala Albertine Rift fahatelo amin'ny resaka mpiara-manankarena amin'ny karazany aorian'ny Valan-javaboary Virunga ao RDC sy ny ala Bwindi Impenetrable any Oganda. Ho an'ny maharatsy azy, ny flora amin'ny faritra iva dia mbola tsy fantatra firy. Ny lisitr'ireo karazam-borona voajanahary amin'ny valan-javaboary Kahuzi-Biega dia mbola tsy feno, ary nahita karazana vaovaom-biby maro an'isa indrindra ho an'ny fianakavian'i Balsam Orchidaceae & Purple Spurge, Araliaceae, Anacardiaceae, ary fianakaviana maro hafa miaraka amin'ny karazany manokana (Fischer , 1995).
Ny tanjona amin'ny fiarovana ny fiainana dia ny fiainana dia sy ny vondrom-piarahamonina tandindomin-doza, ary toeram-ponenana mitsikera ary tsy mety miaro. Ny tanjon'ny orinasa fanampiny na vondrona fanampiny dia ambaratonga amin'ny antsipiriany kokoa amin'ilay tanjona ampiarahin'izy ireo (ampahany amin'ny toeram-ponenana, sary, media, sns.). Ny teny hoe toetra ekolojika manan-danja amin'ny toetra voajanahary lehibe amin'ny karazan-javamananaina, mponina na ekosistia mivoatra rehefa mandeha ny fotoana na vokatry ny fikorontanana voajanahary ary mamela ny fitazonana ny karazana toe-piainana izay ampifanarahana ny karazany. Ankoatr'izay, ny ala tsy manam-paharoa manarona KBNP milentika karbaona manan-danja mba handray anjara amin'ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro.
Raha miresaka momba ny fizahan-tany dia manolotra fitsangatsanganana gorilaza ho tena manintona anay izahay. Ny fitsangantsanganana, ny fidirana an-tendrombohitra ary ny fijerin'ny vorona dia mifameno amin'ny zava-mahasarika. Izahay irery no toerana tokana ahafahan'ny mpitsidika mandeha amin'ny gorilazy ambany amin'ny ala. Izahay dia mametraka ny ezaka ataonay mba hitazonana ny asa fizahan-tany rehetra haharitra sy ekolojika.
Fanazavana fanampiny: www.kouzibiega.org
Fampahalalana bebe kokoa momba ny Birao Afrikana momba ny fizahantany:www.africantourismboard.com
Xtra Aerospace any Florida dia tompon'andraikitra amin'ny fianjerana Boeing 737 Max ihany koa?
Thailand: Ilay Pagoda 1,000 Spire
Ny American Hotel and Lodging dia miarahaba ireo torolàlana momba ny sarontava CDC vaovao
Misaron-tava sa tsy hisaron-tava? Fanontaniana izay mangataka fanontaniana bebe kokoa